Tantaran’i Noa Andraisantsika Lesona
Afaka ny ho Sakaizan’Andriamanitra Ianao!
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Boulou Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frafra Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kariba Kinyarwanda Kirghiz Kissi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Laosianina Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Mbunda Medumba Mizo Nahuatl (Guerrero) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pendjabi Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Sarnami Serba (Sirilika) Setswana Shona Shuar Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Norvezianina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tigrigna Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Urhobo Venda Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa Éwé
Tantara Andraisantsika Lesona
Tsy havelan’i Jehovah hiaina ao amin’ny Paradisa ny ratsy fanahy, sao manimba azy io. Ireo namany ihany no hipetraka ao. Inona no hanjo ny ratsy fanahy? Mba hahalalanao izany, dia diniho ny tantaran’i Noa, izay niaina an’arivony taona lasa izay. Tena nisy izy io fa tsy angano fotsiny. Lehilahy tsara toetra i Noa, ary nanao ny sitrapon’i Jehovah foana. Ratsy fanahy anefa ny olona tamin’izany. Nilaza tamin’i Noa àry i Jehovah fa handefa safodrano, mba handringanana ny olona ratsy rehetra. Nasainy nanamboatra sambofiara i Noa, mba hamonjena azy mianakavy amin’ny Safodrano.—Genesisy 6:9-18.
Nanamboatra sambofiara i Noa sy ny fianakaviany. Nampitandrina ny olona i Noa hoe ho avy ny Safodrano, nefa tsy nihaino izy ireo fa mbola nanao ratsy ihany. Rehefa vita ilay sambofiara, dia nampidirin’i Noa tao ny biby sasany. Niditra tao koa izy mianakavy. Nandefa oram-be nivatravatra i Jehovah avy eo, nandritra ny 40 andro sy 40 alina. Difotry ny rano ny tany manontolo.—Genesisy 7:7-12.
Maty ireo olona ratsy, fa i Noa sy ny fianakaviany kosa voavonjy. Narovan’i Jehovah izy ireo nandritra ny Safodrano, ary niaina tamim-pilaminana avy eo, satria tsy nisy ratsy intsony. (Genesisy 7:22, 23) Milaza ny Baiboly fa handringana ny ratsy fanahy indray i Jehovah, tsy ho ela. Tsy ho ringana anefa ny tsara fanahy. Hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany kosa izy ireo.—2 Petera 2:5, 6, 9.
Maro ny olona manao ratsy ankehitriny. Feno faharatsiana ny tany. Maniraka ny Vavolombelony foana i Jehovah, nefa tsy mety mihaino ny fampitandreman’izy ireo ny ankamaroan’ny olona. Tsy mety miova izy ireny, ary tsy manaiky izay lazain’Andriamanitra. Inona no hanjo azy ireo? Mety hiova ihany ve izy ireo indray andro any? Maro no tsy hiova mihitsy. Ho ringana ireny olona ratsy fanahy ireny, ka tsy hisy intsony.—Salamo 92:7.
Tsy ho potika ny tany fa ho lasa paradisa. Hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany ireo naman’Andriamanitra.—Salamo 37:29.
LESONA 1 Tian’Andriamanitra ho Namany Ianao
LESONA 2 Andriamanitra no Namana Tsara Indrindra
LESONA 3 Mianara Momba An’Andriamanitra
LESONA 4 Ahoana no Hahafantaranao An’Andriamanitra?
LESONA 5 Hiaina ao Amin’ny Paradisa Ireo Naman’Andriamanitra
LESONA 6 Efa Akaiky ny Paradisa!
LESONA 7 Tantara Andraisantsika Lesona
LESONA 8 Iza no Fahavalon’Andriamanitra?
LESONA 9 Iza no Naman’Andriamanitra?
LESONA 10 Ahoana no Amantarana ny Fivavahana Marina?
LESONA 11 Mialà Amin’ny Fivavahan-diso!
LESONA 12 Manao Ahoana ny Olona Rehefa Maty?
LESONA 13 Ratsy ny Manao Ody
LESONA 14 Tsy Manao Ratsy ny Naman’Andriamanitra
LESONA 15 Manao ny Tsara ny Naman’Andriamanitra
LESONA 16 Asehoy fa Tia An’Andriamanitra Ianao
LESONA 17 Aoka Ianao ho Mendrika ny ho Naman’Andriamanitra
LESONA 18 Aoka Ianao ho Naman’Andriamanitra Mandrakizay!
Soratra Fandikana sary sy soratra
Raki-peo Fandikana raki-peo
Noa: Ilay Niara-nandeha Tamin’Andriamanitra